Ciidanka Macawiisleyda oo dagmada Cadale ku dilay saraakiil iyo Askar Shabaab ah – Somali Top News
Horjoogihii Kooxda Al Shabaab ee Degmadda Cadale ee Gobolka Sh/dhexe ayaa lagu dilay deegaanka Xagarey oo 40 KM u jirta Degmadaas.
Horjoogahan ayaa waxaa lagu dilay howlgal ay halkaas ka fuliyeen Ciidanka Macawiisleyda oo dagaal kula jira Al Shabaab shalay galinkii danbe.
Taliyaha Macawiisleyda Axmed Dhagey ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in sidoo kale howlgalka ku dileen Seddex Argaggixiso kadib weerar gaatin ah oo ay ku qaadeen deegaanka Xagarey oo Maleeshiyada Al Shabaab dadka ku dhibaateyn jireen.
Horjoogaha la dilay ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay Macalin Caadey,sidoo kale wararku waxaa xiliga la dilayey la joogay isna ku xigeenkiisii oo dhaawac dhanka duurka ugu baxsaday.
Deegaanka lagu magacaabo Xagarey oo hoos yimaada degmadqa Cadale ayaa waxaa halkaas xarun kula lahaa Argaggixisada, iyadoona Weerarka lagu qaaday gabi ahaanba lagu soo burburiyey xaruntii ay halkaas ku lahaayeen.
Macawiisleyda ayaa waxaa garab siiya Ciidanka Xoogga dalka iyo dadka shacabka ah kuna dhiiro galiya inay sii wadaan dagaalka kula jiraan Al Shabaab oo dadka Soomaaliyeed ku haya dhibaato badan oo dhankasta ah.
← Netherlands oo aqoonsatay Baasaboorka Diblomaasiga iyo kan Shaqaalaha
Kenyan Army Commander General Raria visits Somalia days after deaths of KDF forces →
Dagaal ka dhacay dagmada Ceef-Afweyne ee gobalka Sanaag